Ny hoavin'ny Macbook sy ireo fiasa vaovao | Avy amin'ny mac aho
Ny hoavin'ny Macbooks sy ireo fiasa vaovao
Steve Jobs tamin'ny androny ary Tim Cook izao. Samy manandrana mandresy lahatra anay izy roa fa ny ho avin'ny solosaina manokana dia ny iPad Pro, fa Ahoana ny amin'ny Macbooks?
Fantatr'i Apple fa tsy afaka manolo solosaina ny takelaka misy azy ankehitriny, tsy azo eritreretina izany. Azonao atao ny mampiasa azy hanoloana azy amin'ny asa sasany na amin'ny fotoana fohy, fa na ho ela na ho haingana dia tsy maintsy mandeha mamaky ny rafitra birao ianao mba hanao zavatra iray, na satria tsy azo atao ao amin'ny iOS izany na hahazoana fampiononana sy fanamorana tsotra.
1 Ny Macbook dia hiova afaka taona vitsivitsy
2 Fifandonana eo amin'ny takelaka sy ny solosaina
Ny Macbook dia hiova afaka taona vitsivitsy
Ity lahatsoratra ity dia ny hevitro araka ny tsaho sy ny fivoahana samihafa izay efa hitantsika. Toy izany koa, miorim-paka amin'ny hevitro amin'ny hetsika marketing any Apple sy ny vokatra vokariny aho. Amin'ny lafiny iray izy ireo dia manandrana mivarotra anay ny iPad Pro ary etsy ankilany ny Macbook. Fantatr'izy ireo fa samy manana ny fampiasany ary tsy misy misolo ny sakaizany. Izany no antony, noteren'izy ireo izahay hividy fitaovana roa mihoatra ny € 1000, raha raisinay ireo fanampiny izay takian'ny iPad Pro (fitendry tsy misy Ñ, pensilihazo, tranga ...).
Mikasika ny Macbooks, mamelombelona ny tenany ny faritra manontolo. Hanjavona ny maodely Air rehefa vitany ny mampidina ny vidiny amin'ny Macbook farany an'ny 2016, ary havaozina tanteraka ny Pro, ankoatry ny hahitana fanatsarana toy ny Touch ID, tontonana OLED amin'ny kitendry hisolo ny bokotra fiasa sns.
Afaka nahita fiovana bebe kokoa isika tamin'ny taona ho avy. Angamba ny efijery na mikasika fampiharana hafa. Sensors, projectors ... iza no mahalala, Apple dia mbola manana zavatra maro hahagaga antsika. Mila mahita fotsiny ireo patanty isan-karazany izay soratany isan-taona. Toy ny esory ny seranan-tsofina, fihetsika mampidi-doza fa izay hankasitrahana amin'ny ho avy.
Fifandonana eo amin'ny takelaka sy ny solosaina
Raha ny lojika dia tsy fantatsika tsara hoe aiza no mety hitondran'ny orinasa manana paoma manaikitra antsika, fa raha manohy manatsara ny iPad Pro izy ireo ary sahy manavao ny rafitra fiasan'izy ireo mampifanaraka izany amin'ilay hevitra hoe soloina ny PC, hanana ny Macbook mamerina mamerina ny tenany. Na izany na tsy izany dia ilaina hatrany ny solosaina, indrindra amin'ny tontolon'ny matihanina, satria tsy afaka manao ny zava-drehetra amin'ny takelaka azonao atao amin'ny solosaina ianao, na firy na firy na fampiasa inona no ampihariny. Farafaharatsiny mba hanohizantsika mijery ny fomba ny iPad Pro dia tsy afaka manoatra ny Macbook.
Ho an'izany rehetra izany dia tsy tokony hamporisika ny hividy iPad Pro na Macbook aho, satria samy mbola lavitra ny lalana, ny iray hanatsarana ny rindrambaiko ary ny iray hafa hampiditra ireo fanatsarana manintona izay resahina betsaka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » Ny hoavin'ny Macbooks sy ireo fiasa vaovao
Eny, mila solosaina finday vaovao aho ary saika saika hividy Macbook, ankehitriny dia nesorinao tanteraka aho
Amin'ny farany dia hividy Windows aho izay nampiasaiko tamin'ny fiainako rehetra ary mahay tsara kokoa aho
Josekopero dia hoy izy:
Ny MacBook Pro no hany tokana tsy atoro ahy satria hanavao azy ireo izy ireo. Raha misafidy ny 2016 Macbook ianao dia matokia fa tsy havaozina izany raha tsy amin'ny fahavaratra manaraka ary ekipa mahafinaritra izany. Raha afaka miandry herintaona ianao dia manoro hevitra foana ny miandry raha sanatria, fa raha mila izany dia mandrosoa. 😉
Valiny tamin'i Josekopero
Varotra Apple Q2, fanomezana Apple ho an'i Chine, maody maizina amin'ny fampiharana antoko fahatelo, sy maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro ao amin'ny SoydeMac
Irlandy, miandry ny EU amin'ny "raharaha Apple"